Mabhuku: iyo nyaya yemapofu yeBafia, kukanganisa kunotyisa kwekoloni - Jeune Afrique - teles relay
Chiremba Jamot nechikwata chake, muCameroon, muna 1930. © Albert Harlingue / Roger-Viollet
Mubhuku rake idzva, Cameroonia Mutt-Lon anotarisa kumashure pane chiitiko chine hutsinye chekupambwa kwevanhu vekoloni, icho chakonzera kupofumadzwa kwevanhu mazana manomwe mudunhu re Bafia.
Damienne Bourdin mukadzi wechidiki ane makore makumi matatu nemashanu ekuzvarwa akasungwa nechero nguva kuti abatane nemauto emishonga epanzvimbo muna 31 uye anozviwana ari muCameroon naDoctor Jamot. A trajectory iyo iri mbiri uye yakanyanya banal.
Singular nekuti iye mukadzi, anobva mudunhu mabhurari maisirwo ezvinhu anokosha kupfuura kungoita munhu uye mhuri dzine pfungwa yakajeka yenzvimbo yemukadzi munharaunda.
Banal nekuti tiri pakati pehondo mbiri, kukura kwemakoloni kuri padanho radzo uye kunotora kumeso kwakasiyana-siyana, kubva mukushomorwa kwehupfumi kusvika mukukunda kwechitendero, kusanganisira matambudziko akakura ehutano akanangana neichi chikuru. hapana nyika yemunhu havana kuziva kuti Africa ichiri mumaziso eWest.